बीमा: फ्रीलान्सर्स र पेशेवरहरूको लागि पूर्वानुमान प्याक | अर्थव्यवस्था वित्त
बीमा: फ्रीलान्सर्स र पेशेवरहरूको लागि पूर्वानुमान प्याक
जोस रीसियो | | बीमा
स्वरोजगार उत्पादक कपडाको क्षेत्रहरू मध्ये एक हुन् जसलाई सब भन्दा बीमा कम्पनी चाहिन्छ अप्रत्याशित डर बिना तपाइँको गतिविधि को सामना गर्न को साथ। तिनीहरूको आवश्यकता जनसंख्याको अन्य क्षेत्रहरू भन्दा धेरै फरक छ, र त्यसैले उनीहरूलाई आफ्नो स्थितिमा अनुकूलित कभरेज आवश्यक छ। बीमाकर्तामा दिविना पासोरा तिनीहरू यो जान्दछन्, र यसैले उनीहरूले एक सुरु गरेको हो पूर्वानुमान प्याक, स्वतन्त्र पेशेवरहरूको लागि अभिप्रेत।
यसले तीन उत्पादनहरू समावेश गर्दछ: दुर्घटना बीमा, अस्पताल भर्ती बीमा र विशेषज्ञ स्वास्थ्य बीमा। तिनीहरूसँग यो समूह कुनै समस्यामा पर्दछ कि यसले यसको गतिविधिलाई असर गर्न सक्छ, अधिक पूर्ण समाधानको प्रस्ताव लिएर।
मूल्य पनि छ आवश्यकताहरू प्रत्येक लाई अनुकूल गर्दछ किनभने, उदाहरणका लागि, दुर्घटना बीमामा कोटा छनौट गर्न सम्भव छ, लागत र बीमा कभरेज अनुकूलन गर्न प्रत्येक पेशेवरलाई के आवश्यक छ।
1 ग्रेटर कभरेज
2 ग्रेटर भाडामा लचिलोपन
3 स्पेनमा स्वरोजगारको संख्या
के बीमा प्रस्ताव गर्छ? ठीक छ, हाइलाइट गर्न पहिलो चीजको सम्भावना हो दुर्घटनाको कारण अस्थायी वा कुल अक्षमताको लागि लाभ संकलन गर्नुहोस्। केहि आत्म-रोजगार व्यक्तिले ठूलो मूल्यवान् छ केहि, यो एक मन को भारी शान्त हो किनकी नियमित आय जो पनि हुन्छ सुनिश्चित गर्न।
निस्सन्देह यो हामी मात्र फेला पार्ने चीजबाट टाढा छ। यस प्याकको साथ शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप कभर छन्, जन्मदर ...
यो क्षेत्र मा ठ्याक्कै यो छ कि हामी अभिनव कभरेज पाउँछौं: को मामिलामा एक विशेष सेवा अशक्त बच्चाहरू भएको। यद्यपि नयाँ कभरेजको बावजुद, सबैभन्दा प्रमुख मध्ये एक दन्त लाभहरू समावेशीकरण हुन जारी छ जसमा विशेषज्ञहरूको स्वास्थ्य बीमा समावेश छ। यो बीमामा हामीले उपचार गर्न चाहने डाक्टरको स्वतन्त्र छनौट छ, विशेषज्ञहरूको विस्तृत सूचीबाट जुन हामीले फेला पार्न सक्ने सबैभन्दा विस्तृत र पेशेवर मेडिकल चार्टहरू मध्ये एक बनाउँदछ।
र तिनीहरूले जान्दछन् कि स्वरोजगारका लागि समय पैसा भन्दा बढी हो, प्रतीक्षा सूचीहरू एक अवधारणा हो जुन उनीहरूलाई थाहा छैन Divina Pastora मा। त्यो एक्लो पहिल्यै नै एक ठूलो मूल्य हो, दुबै व्यक्तिको स्वास्थ्य र पेशेवरको कामको जीवनको लागि।
ग्रेटर भाडामा लचिलोपन
न केवल शुल्क सस्तो छन्। हामीले भनेझैं, स्वायत्त यसलाई परिमार्जन गर्न धेरै समायोजन गर्ने स्थितिमा छ। छ उच्च लचकता प्याकलाई काममा लिदा यो कुनै पनि गतिविधिको लागि आदर्श हुन्छ। त्यसोभए प्रत्येक पेशेवरले उनीहरूलाई वास्तवमै चाहिने चीजहरू लिन सक्छन्।
र यो यो हो कि यदि एक डिजाइन पेशेवर घर मा काम गर्छ भने एक यातायात पेशेवर जस्तै छैन जो सडकमा दिन खर्च गर्दछ। यदि प्रत्येक स्वतन्त्रकर्ताको विभिन्न काम हुन्छन्, विभिन्न जोखिमहरूका साथ, किन उनीहरूले समान बीमा लिनु पर्छ?
पक्कै पनि समाधान प्रत्येक परिस्थितिमा अनुकूलित यो बीमा सम्झौता गर्दा एक आवश्यक आवश्यकता हो, र यो पूर्वानुमान प्याकले यसको चिन्तन गर्दछ।
स्पेनमा स्वरोजगारको संख्या
स्पेनमा स्वरोजगार कामदारहरूको संख्या २०१ 2016 मा स्थिर भयोUPTA द्वारा प्रदान गरिएको डाटाका अनुसार। उनीहरूले देखाउँछन् कि यस विश्लेषणित अवधिमा कूल 661.000 640.000१,००० रेजिष्ट्रेसनहरू पंजीकृत गरिएका थिए, जबकि ड्रपहरू थोरै कम थिए, जम्मा XNUMX०,००० रहेको थियो।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » वित्तीय उत्पादनहरू » बीमा » बीमा: फ्रीलान्सर्स र पेशेवरहरूको लागि पूर्वानुमान प्याक
मानहरू जुन २०१ 2017 मा सब भन्दा बाहिर खडा हुन्छ
सानो क्याप सुरक्षा: तिनीहरू के मन पराउँछन्?